Lalan-tokana ny mankany amin’Andrimanitra
Harena, fiadanana…izany hatrany no tanisain’ireo mpitarika fiangonana evanjelika ankehitriny. Iniana tsy tononina intsony ny voambolana “sekta” na “fiangonana zandriny” tsy hanafintohana.
Maro ireo hetsika ataon’ireo fiangonana vaovao ankehitriny ary hainy ny manjono ny tanora amin’ny renty, mozika, haingo isan-karazany kinanjo fanasana atidoha no tena fototra. “Indray andro aho nisy nanasa hiara-hivavaka tao amin’ny toerana fivorian’izy ireo. Tsy nandaà aho satria vavaka no hatrehina. Akory anefa ny hatairako mahita ireo olona mivezivezy sy miresaka sy mikotaba anaty toriteny sy vavaka. Amiko, mila fahanginana sy fifantohana tanteraka izany miara-mivavaka izany. Teo aho vao tonga saina fa hay moa ka tsy Tranon’ Andriamanitra ity misy ahy fa trano fijerena sarimihetsika. Tsy nandia tany intsony ny tongotro satria tsapako avy hatrany fa tsy tamana amin’ny horakoraka sy kotaba izany Andriamanitra izay manana ny fahamasinany, ny fahamarinana ary milamina izany. Haiko ny mahatonga ireo olona tia mamonjy irney fivoriana ireny. Tsy misy litorjia arahina fa dia sahala amin’ny manatrika konferansa lehibe ka voaporofo eo fa kabary tsy valiana ny toriteny. Niova toerana indray aho ary naniry ny hihaona tamin’ilay nolazaina fa pastera aho kinanjo teny an’avona no azoko. Hay tsy manam-potoana hihainoana ireo olony ireny pasitera ireny fa sahiran-dava? Na mety ho tsy nihaingo laoatra aho ka fantatra avy hatrany fa tsy karazan’irony vonona hanome fahafolon-karena irony”, hoy ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray nisafidy ny tsy hitonona anarana.
Ankosotra avokoa izao hita izao. Mamitaka io. Aza mety ho sodokan’ny fampanantenan’olombelona. Ny harena eto an-tany anie ka mety lo, mora rava sy manjavona. Tsy misy mahay ny ambadik’ireny fikambanana sy fiangonana miforona ireny. Moa ve tena mitaona ny olona ho any amin’Andrimanitra ? Mino sy mamahtoky ny Telo Izay Iray ve izy ireny? “Ny hitako aloha dia resaka harena foana no toriana ankehitriny. Mamonjy ny fanahy ve anefa izany? Mitaona ny olona amin’ny fibebahana aloha izao no tena imasoana, ampirisihana ny olona hamaky ny Soratra Masina satria Io irey ihany no manambara ny fahamarinana dia I Jesoa Kristy Zanaka kaizay mino Azy ihany no handova ny fiainana mandrakizay.
Aza mety hofitahina isika. Itory teny am-boalohany ny mpitarika fa rehefa vita izany rehetra izany dia mitaona ny mpiangona sy mpanatrika hanao vavaka fangatahana ho an’ny fiarovana ny fahasalamana, ny fianakaviana, ny varotra, ny asa, ny vola miditra, ny karama, ny harena mety ho azo sy ny sisa izy avy eo. Moa ve tsy efa nampitandrina antsika Jesoa Kristy ny amin’ny hikatsahana ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tadidio fa ny fivavahana marina dia ny fiahiana ny kamboty sy ny mpitondra tena. Mila mazoto sy mahery amin’ny fiainam-bavaka isika, mazoto mifady ny ratsy na dia tsy tanteraka aza, mazoto mitia, mazoto mandefitra, mazoto manetry tena.
Mety hiteny isika hoe maro ny lalana hahatongavana any amin’Andriamanitra, ny fiafanana, ny filaminana sy ny fiainana mandrakizay : Jesoa Kristy, Ilay Tompon’ny Tompo sy Mpanjakan’ny Mpanjaka, Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana.